Dhageyso Wiilkii la sheegay inuu Isku Qarxiyay Xamar oo beeniyay warkaasi |
Dhageyso Wiilkii la sheegay inuu Isku Qarxiyay Xamar oo beeniyay warkaasi
Somalinimo1.com waxay halkaan idin kugu soo bandhigaysaa wareysi lala yeehsay wiil la sheegay inuu ka mid ahaa ragii la sheegay iney isku qarxiyeen xarunta maxkamada gobolka Banaadir.
Muuqaal muujinaya in Ibraahim uu isku qarxiyay weerar ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa warbaahinta soo gaaray xili danbe oo shalay ah.
Hase ahaatee waxaanu halkan idiinku soo gudbinayna waraysi uu bixiyey wiil Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Ibraahim Inbu Abaas Al-haderey oo shalay ilaa xalay muuqaalkiisa warbaahinta Soomaalidu aad u hadal hayeen iyagoo ku eedeeyey inuu ka mid ahaa dadkii maalintii axada isku qarxiyeye maxkamada gobolka Banaadir.
Ibraahim waxa uu ku nool yahay dalka maraykanka gaar ahaan gobolka Pennsylvania.
Qaar ka mid warbaahinta yaa soo qaatay muuqaal uu Ibraahim ku amaanayo uguna tala galay hooyadiis iyo dhibkii ay kala soo martay markay dhalaysay waxaynu ku qoreeen inuu Ibraahim hooyadiis usii reeben fariintan ka hor inaatnu isku qarxin magaalada Muqdisho halkaasoo inka badan 30 qof ku naf waayeen maalintii axada.
Halkaan hoose riix si aadd u dhageysato warbixintaani oo ku baxeysa luuqada English ah.
Ibraahim ayaa sheegay inuu yahay muwaadan Soomaaliyeed kuna dhashay magaalada Hargeysa ee waqooyiga Soomaaliyed sanadu markay ahayd 1984 halkasoo kaga soo kexeeyey isagoo 6 bilood jira, ibraahim waxaa uu sidoo kale sheegay inuu jecelyahay Soomaaliya balse aanu ilaa wakhtigaas ku laaban.
Ibrahim oo arintan ka hadlayana wuxuu yihin ” aad baan uga xumahay in ay warbaahinta Soomaalidu iga faafiso war aaan sal iyo raad lahayn, waxaan ilahay ha baryayaa inuu ka jaaza mariyo kuwii beentan iga faafiyay wakhtigan adagna lasoo gudboonaysiiyey aniga iyo qoyskayga, ilahay Muslimint beenta haka ilaaliyo iyo iango dhanba”.
Ibraahim waxaa uu intaas ku daray inuu gabi ahaanba kasoo horjeedo mabaadiida iyo fikirka ay qabaan xarakada Al-Shabaab ee ka dagaalanta qaybo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya aanu waligiina taageerayn.